Chikafu Thermal Sterilization Kudzidziswa
1. Zvinangwa zvekudzidzisa Kuburikidza nekudzidziswa, kunatsiridza mbichana dzidziso uye nekuita mashandiro evadzidzi, kugadzirisa matambudziko akaomarara panguva yekushandisa kwemidziyo uye kugadzirisa michina, kusimudzira mashandiro akaenzana, uye kugadzirisa sainzi uye chengetedzo yechikafu ...Verenga zvimwe »
Nyowani, Kudya zvinovaka muviri, Yakachengeteka, iri rudzi rwechikafu chomumagaba chinofanira kunge chiri icho chaunoda!
Chikafu chomumagaba chiri chitsva Chikonzero chikuru chinoita kuti vanhu vasiye chikafu chemumagaba ndechekuti vanofunga kuti chikafu chemumagaba hachisi chitsva. Uku kufungira kwakavakirwa pamifungo yevatengi nezve chikafu chemumagaba, izvo zvinoita kuti vaenzanise masherefu hupenyu hwakareba nekusasimba. Nekudaro, chikafu chemumagaba chinogara kwenguva refu ...Verenga zvimwe »
Mukufunga kwako, pane chishandiso chemumagaba package "chakakushamisa" iwe?
Sezvo nguva yenguva, vanhu vakaona zvishoma nezvishoma mhando yechikafu chemumagaba, uye kudiwa kwekusimudzirwa kwekushandisa uye zvizvarwa zvidiki zvakatevera imwe zvichitevera. Tora nyama yakakangwa yemasikati nyama semuenzaniso, vatengi havangodi kuravira chete asiwo inokwezva uye yakavakirwa pasuru. Thi ...Verenga zvimwe »